भोटसिपा दुर्घटना : ड्राइभरले भनेका थिए– झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् ! - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाज ∕ भोटसिपा दुर्घटना : ड्राइभरले भनेका थिए– झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् !
भोटसिपा दुर्घटना : ड्राइभरले भनेका थिए– झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् !
Sindhu Khabar शनिबार, २०७६ असोज २५ / १०:४९
काठमाण्डौं, २५ असोज ।
सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौताराकी सल्फु श्रेष्ठ दशैंको टीका लगाउन दिदीको घर जाँदै थिइन् । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–९ को सिपाटारबाट काठमाडौंका लागि छुटेको बा २ ख २७१५ नम्बरको बसमा थिइन् उनी । दशैंको समय काठमाडौं फर्किने तथा दशैंको टीका लगाउन आफन्तकोमा जाने यात्रु बसभित्र खचाखच थिए ।
ट्रमा सेन्टरमा उपचारत सिन्धुपाल्चोकका पुण्य तामाङ पनि घरमा दशैं मनाएर सोही बसमा काठमाडौं आउँदै थिए । उनी अन्तिम सिटमा थिए । उनले बस सिपाटारको ओरालोमा रोकिएको थाहा पाएका थिए । ओरालोमा रोकिएको बस एक्कासी तिब्र गतिमा गुडेर गुम्ती आएपछि पल्टिएको तामाङ बताउँछन् । सो बस दुर्घटनामा तामाङको एउटा हातमा चोट लागेको छ ।
तामाङका अनुसार बसभित्र र बसको छतमा समेत यात्रुहरु खचाखच थिए । ‘सिपाटारको ओरालोमा गाडी के भएर रोकिएको थियो, त्यसपछि गाडी स्पीडमा गयो, टर्निङमा आएपछि पल्टियो, हेर्दाहेर्दै लड्यो,’ तामाङले भने, ‘बसभित्र सिटबाहेक उभिएका धेरै नै मान्छे थिए, छतमा पनि मान्छेहरु चढेका थिए । ब्रेक फेल भएरै गाडी पल्टियो ।’
घाइतेहरुको धुलिखेल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये १३ जनालाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको छ । ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका १३ जना घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी अर्जुन भेटुवालले बताए । ‘हाम्रो अस्पतालमा १३ जना विरामी ल्याइएको थियो, ती मध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ, हेड इन्जुरी भएको छ । उनीहरुलाई आकस्मिक सेवाको रेडजोनभित्र राखिएको छ,’ उनले भने, ‘९ जना बिरामीहरु आकस्मिक सेवा कक्षकै अन्य वार्डमा उपचारत छन् ।’